ပိုက်ဆံမစုနိုင်ဘဲ ရန်သာဖြစ်ကြတဲ့ Edokko များ!!! (ဘာကြောင့် အဲ့ဒီလောက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လူတွေဖြစ်နေရသလဲ?) - JAPO Japanese News
ဂါ 30 Nov 2021, 10:49 မနက်
အားလုံးပဲ “ Edokko” (အဲဒိုခို) ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုကြားဖူးပါသလား?
“ အဲဒိုခို” ဆိုတာကတော့ မိမိထက်မျိုးဆက် ၃ ဆက်စောပြီး တောက်လျှောက်တိုကျိုမြို့လယ်ခေါင်မှာ နေထိုင်လာခဲ့တဲ့လူတွေကို ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒိုရဲ့ဧရိယာဟာ လက်ရှိတိုကျိုထက်ကျဉ်းပြီး၊ မြေပုံအားဖြင့်ဆိုရင် ဒီလိုပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
Asakusa နှင့် Kanda၊ Nihonbashi ဝန်းကျင်ကအဓိကကျပြီးတော့၊ အနောက်ဘက်မှာတော့ Akasaka နှင့် Azabu ဝန်းကျင်က အဲဒိုရဲ့မြို့စွန်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်က Shinjuku နဲ့ Shibuya ဆိုတာ ဘာမှမရှိသေးတဲ့ အထီးကျန်စရာ ရွာကလေးသာဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်၊ ဒီဇာတိဖွားတွေကိုတော့ “ အဲဒိုခို” လို့မခေါ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့မိခင်ကတော့ “ အဲဒိုခို” ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့၊ အဖေက Iwate စီရင်စုဇာတိဖွားဖြစ်လို့ ကျွန်တော်ဟာ “ အဲဒိုခို” နဲ့ Iwate သားရဲ့ သွေးနှောကပြားဖြစ်သွားပါတယ်။
“ အဲဒိုခို” ရဲ့ထူးခြားချက်ထဲက ၁ ခုမှာ၊ ပိုက်ဆံမစုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ ထူးခြားချက်ရှိတာကို စာဖတ်သူတို့အားလုံးသိကြလား?
ဒီလိုစကားလှလှလေးတွေကို အဲဒိုခိုတို့က အသုံးပြုကြတယ်။
တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရရင်၊ ရလာတဲ့ပိုက်ဆံဟာ ထိုနေ့ချင်းမှာတင် သုံးလို့ကုန်သွားပြီ！ ဆိုတဲ့ လူဖျင်းတွေပြောတဲ့စကားပေါ့။
စကားလုံးကို လှတပတလေးပြောသော်လည်း အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အရည်အချင်းမရှိတဲ့သဘော ပေါ်လွင်တယ်။
ကျွန်တော်က သွေးနှောကပြားလို့သာပြောတယ် တိုကျိုမှာပဲ ကြီးပြင်းလာတာပါ။ အဲ့ဒီအချိန်လောက်က “ အဲဒိုခို” ဆန်တဲ့လူတွေတော်တော်များများကို တွေ့ရတယ်။ နေ့တိုင်း အလုပ်လုပ်မစား ဘောလောဘောလောနဲ့ သောက်စားပြီး လမ်းပေါ်အိပ်တဲ့လူတွေအများကြီး ရှိခဲ့ပါတယ်။ တကယ့်ကို 宵越しの銭を持たない ပုံစံပါပဲ။ “ ဦးလေး ခေတ်တွေပြောင်းသွားပြီလေ” လို့ပြောလိုက်ရင်တော့ ရနိုင်မယ်ထင်တယ်။
ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်လာရသလဲလို့ ပြောရရင်တော့၊ အဲဒိုမှာပဲတွေ့ရတဲ့ထူးခြားချက်က အဲ့ဒီလိုဖြစ်စေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။
အဲဒိုမှာနေထိုင်ခဲ့ကြတာက မြို့နေပြည်သူများမှာ ၅ သိန်း၊ ဆာမူရိုင်း ၅ သိန်း၊ ဘုရားကျောင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အချို့သူတွေက ၁ သိန်း၊ လူစုစုပေါင်း ၁၁ သိန်း။ အဲ့ဒီခေတ်အခါရဲ့ ဥရောပမြို့ကြီးမှာတော့ လန်ဒန်မှာလူဦးရေ ၇ သိန်း၊ ပဲရစ် ၅ သိန်း၊ Vienna ၂ သိန်းခွဲ စသဖြင့်ရှိခဲ့တဲ့အတွက်၊ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမြို့ဟာ အဲဒိုမြို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုအချိန်က ဥရောပမြို့ပေါ်မှာ ဒီလူဦးရေနဲ့အမှိုက်တွေပြည့်နက်နေပြီး၊ အလွန်နံစော်တဲ့မြို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ပဲ ရေမွှေးတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့လည်း ပြောကြပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာလည်း အဲဒိုဟာ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းကိုစေ့စေ့စပ်စပ်လုပ်ဆောင်လာလျှက်ရှိပြီး၊ မြေဩဇာတောင် recycling ကိုအဓိကထားတဲ့အတွက် အမှိုက်သိပ်မထွက်တဲ့ Eco city ဖြစ်တာကြောင့်၊ ဒီလောက်ထိကြီးအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တာပဲလို့ ထင်ပါတယ်။ အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့မြို့ဖြစ်ခဲ့ပုံရပေမဲ့၊ ပြဿနာတစ်ခုကတော့ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒိုမြို့မှာအိမ်တွေကို အကုန်သစ်သားနဲ့ပဲ ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီအပြင် လူပေါင်း ၁၁ သိန်းနေထိုင်တဲ့ မြို့ပြကြီးဖြစ်လာတာနဲ့လိုက်ပြီး တော်တော်လေးလူတွေ ပြည့်နက်စည်ကားလာတာကြောင့်၊ အိမ်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး နီးကပ်လာပါတယ်။ ပိုပြီးဆိုးတဲ့ပြဿနာကတော့ ဆောင်းရာသီပါ။ ဆောင်းရာသီရောက်ရင် အဲဒိုဟာတော်တော်လေးခြောက်သွေ့သွားတယ်။ မြောက်ဘက်ကနေ လေအေးတွေက အားကောင်းကောင်းနဲ့တိုက်ခက်တယ်။ ဒါကြောင့် အရင်ကတည်းက အဲဒိုဟာနေထိုင်ဖို့ခက်တဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ မီးလောင်ပြီဆိုတာနဲ့ ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ၊ ပုံဖော်ကြည့်နိုင်ပါသလား?
ခြောက်သွေ့တဲ့သစ်သားတွေဟာ မီးလောင်လွယ်ပြီး၊ ဒီအပြင်လေကြောင့် မီးဟာဘေးပတ်လည်ကိုဝေ့ယမ်းပါတယ်။
၅ နှစ်ကိုတစ်ကြိမ် မီးလောင်မှုကြီးဖြစ်လေ့ရှိတဲ့အဲဒိုအတွက် မီးသတ်ခြင်းကို သူတို့တွေဟာဦးဆောင်ပါတယ်။
မီးသတ်တပ်ဖွဲ့လို့ခေါ်ကြတဲ့သူတို့တွေဟာ၊ ရေနဲ့ပက်ပြီး မီးသတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ရေနဲ့ပက်လည်း အချိန်မမီတာကြောင့်၊ မီးပြန့်ပွားမှုကိုတားဆီးဖို့အတွက် ဘေးဘီဝဲယာအိမ်များကို ဖြိုချဖျက်ဆီးပစ်ရပါတယ်။ ဖြိုချဖျက်ဆီးခြင်းလုပ်ငန်းနောက်ကျရင်လည်း မီးကူးသွားပြီး၊ အိမ်တစ်လုံးပြီးတစ်လုံး မီးစားသွားမှာမို့လို့၊ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ အပြင်းထန်ဆုံးဖြိုချခြင်းက အဲဒိုစတိုင် မီးသတ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုပြောကြပြီး၊ တိုကျိုရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုလို့တောင် ပြောရတဲ့အထိပါပဲ။
တစ်လစတည်းပြောရရင် “ အဲဒိုခို” ဟာချက်ချင်းရန်ဖြစ်လွယ်သလို၊
ရန်ဖြစ်ပြီးရင်လည်း သောက်ကြစားကြပြီး ပြန်ပြေလည်သွားတာလည်း မြန်ပါတယ်။
ဒီအချက်နဲ့ ပိုက်ဆံမစုနိုင်တဲ့လူတွေ ထွက်ပေါ်လာခြင်းနဲ့ ဘယ်လိုများ သက်ဆိုင်နေသလဲလို့ဆိုရရင်၊ မီးလောင်ပြာကျသွားပြီး ပစ္စည်းဥစ္စာအကုန်လုံး ဆုံးရှုံးသွားလို့ဆိုတဲ့ဆင်ခြင်ကနေ လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်အလုပ်ဟာ ၁ ရက်ကို သေသေချာချာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီနေ့အတွက်လုပ်အားခက ညနေရရှိတယ်။ မနက်ဖြန်အတွက်ကတော့ မနက်ဖြန်ရှင်း ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲဒိုမှာ အလုပ်အကိုင်အမျိုးမျိုး ပေါများခဲ့ပါတယ်။ မနက်ဖြန်အတွက်အလုပ်မရှိမှာလည်း စိတ်မပူကြပါဘူး။ ဒီနေ့ရရှိတဲ့ပိုက်ဆံတစ်ချို့ကိုစုဆောင်းခြင်းဟာ ဆင်းရဲသားတွေပဲလုပ်တာ ဆိုပြီးခံယူခဲ့ကြတယ်တဲ့…။ ပိုက်ဆံကိုကုန်တဲ့အထိသုံးပြီး ဆင်းရဲသွားတဲ့လူတွေချည်းပဲဖြစ်နေတာတောင်မှပေါ့ …
အဲ့ဒီအချိန်က ဘဏ်လည်းမရှိ၊ ပိုက်ဆံကိုသတ္တု ဒင်္ဂါးတွေနဲ့အသုံးပြုတာကြောင့် လေးလို့ပိုက်ဆံအများကြီးသယ်ပြီး လျှောက်သွားရတာ ပင်ပန်းပါတယ်။ ဒါတောင်မှ ခါးပိုက်နှိုက်နဲ့ ခိုးယူလုယက်ခြင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့ အဲဒိုမှာ အဲ့ဒီလိုအန္တရာယ်ကို မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ပိုက်ဆံစုထားဖို့ဆိုရင်တော့ နေအိမ်မှာဖွက်ထားရုံလွဲပြီးမရှိပေမဲ့၊ စောစောကပြောခဲ့သလို မတော်တဆမီးလောင်မှုဖြစ်ပြီး အကုန်လောင်ကျွမ်းသွားဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများလွန်းတယ်လို့တွေးလိုက်တဲ့အခါ၊ “ အကုန်သုံးလိုက်မယ်” ဆိုတဲ့အတွေးဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။
စကားမစပ် အခြားမှာလည်း “ အဲဒိုခို” ရဲ့ထူးခြားချက်ရှိပါတယ်။ ရှက်ပြီးနှုတ်ကြမ်းတတ်တဲ့စရိုက်မျိုးပါ။
အဲဒိုဒေသိယစကားက အတော်လေးခက်ထန်ပြီး၊ ဆာမူရိုင်းတွေအသုံးပြုခဲ့တဲ့ Yamanote ဒေသိယစကားကတော့၊ ကျိုတိုဒေသိယစကားကိုမီငြမ်းပြီး မွမ်းမံထားတဲ့ စကားအလှဖြစ်ပါတယ်။ မြို့နေအရပ်သားတွေ အသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့အဲဒိုဘာသာစကား၊ အဲဒိုဗားရှင်းလို့ပြောကြတဲ့အရာကတော့ အရမ်းကိုနားဝင်ဆိုးပါတယ်။
ဂျပန်ဘာသာစကားစံနှုန်းနဲ့တိုင်းရင် အတော်လေးကွာခြားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒိုဗားရှင်းလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလို့ ပြီးမှအခွင့်ကြုံရင် မိတ်ဆက်ပေးပါအုံးမယ် …
အဲဒိုကနေ တိုကျိုသို့ပြောင်းလဲလာပြီး၊ နယ်ကနေလူများစွာလည်း ရောက်လာကာ ပိုပြီးကြီးလာတဲ့ တိုကျိုမြို့ကြီးဖြစ်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်လိုကပြားလေးတွေ များလာတာကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ရင်၊ သွေးမနှောတဲ့ “ အဲဒိုခို” စင်စစ်ဟာ သိပ်ပြီးတောင်မကျန်တော့ပါဘူး။ ရှေးထူးခြားချက်တွေ ပျောက်ဆုံးလာတဲ့တိုကျို။ အဲဒိုရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကို တစ်ဖက်ကနေထိန်းသိမ်းရင်းနဲ့ တိုးတက်သွားစေချင်တယ်နော်
ဟင်? ဒီလိုတောရွာမှာလည်း ဒီလောက်ကောင်းမွန်တာလား? ဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ လမ်းမတွေပြည့်နှက်နေတာ ဆာမူရိုင်းတွေရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့်လား?
Modal Shift ဖြစ်နေတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်း။ ရထားလမ်းမှ မော်တော်ယာဥ် ထို့နောက် ရထားလမ်းသို့။